Iibhanki zamandla ezilungileyo ze-iphone yakho (uhlelo luka-2019)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iibhanki zamandla ezilungileyo ze-iPhone yakho (uhlelo luka-2019)
Iibhanki zamandla ezilungileyo ze-iPhone yakho (uhlelo luka-2019)
Umdla onomdla unokujongwa kwii-smartphones zale mihla kule minyaka imbalwa idlulileyo- sibona inkqubela phambili ebonakalayo phantse kuzo zonke iindawo zoyilo, izixhobo zekhompyutha, kunye nesoftware, kodwa ubomi bebhetri buhlala bubonakala ngathi buyaphucuka.
Iibhetri zeLithium-ion ezifumaneka phantse kuyo nayiphi na i-smartphone zisisebenzisile kakuhle iminyaka emininzi, kodwa itekhnoloji ngokuqinisekileyo inemida. Uninzi lweziphatho eziphathwayo ziya kuvalwa ukuba azifumani xesha liphezulu ngetshaja emva kosuku okanye ezimbini zokusetyenziswa kakhulu, kwaye ii-iPhones azikho ngaphandle. Kungenxa yoko le nto iibhanki zamandla eziphathwayo zisenezinye zezona zinto zixabisekileyo kwifowuni.
Imarike yetshaja ephathekayo inkulu kwaye ukukhetha imodeli elungileyo kunokuba ngumceli mngeni. Ukuba kunokwenzeka ukuba ube ungumsebenzisi we-iOS ukhangela eyona bhanki yamandla ilungileyo, uya kuthi kwindawo efanelekileyo. Apha ngezantsi, uya kufumana iingcebiso zethu eziphambili ze Ifowuni ye-8 , Ngaphezulu , X , XR , XS, kunye neXS Max . Izixhobo ezikuluhlu lwethu zilinganiswe kakhulu, zivela kwiimpawu ezihloniphekileyo, kwaye ziya kuhlawulisa i-iPhone yakho ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Masikhe sizikhangele!
Abakhulu bonke abajikelezileyo : Iibhanki zamandla ngentambo yombane : Iibhanki zamandla ngokutshaja ngaphandle kwamacingo : Itshaja ezinesakhono esiphakamileyo
Abakhulu bonke abajikelezileyo
Izinto ezikhethwe kolu didi zibonelela ngebhalansi elungileyo phakathi kwesayizi, amandla ebhetri, ixabiso kunye nokusebenza.
I-Aukey 10,000mAh yebhanki yamandla
Ixhasa zombini iPD kunye neQC 3.0 ukutshaja ngokukhawuleza
Imowudi yokutshaja ephantsi ngoku yezinxibo zakho
Unokuhlawuliswa ngentambo yokukhanyisa
Le modeli ye-Aukey yeyona bhanki yamandla iphakathi-kwendlela onokuyithenga ngoku. Igajethi ixhasa ukuHanjiswa kwaMandla kwe-18W kunye neQualcomm kunye neapos s Charge ekhawulezileyo 3.0. Oku kuthetha ukuba ungabiza i-iPhone yakho kunye nayo nayiphi na ifowuni ephezulu ye-Android ngendlela ekhawulezileyo, ukuyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokuthenga usapho lwakho.
Enkosi kwibhetri ye-10,000mAh ngaphakathi, uya kuba nakho ukonyusa i-iPhone yakho malunga namaxesha ama-3 ngaphambi kokuba ugcwalise kwakhona ibhanki yamandla uqobo. Intambo ye-USB-A ukuya kwi-USB-C ifakiwe ukuyitshaja ngokutsha, kodwa & iiapos ziyakwazi ukuphinda zisebenze kwakhona kwibhanki ngentambo yombane. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ibhanki ikwaxhasa imowudi yokutshaja esezantsi ngoku efanelekileyo kwiifowuni ezingenazingcingo kunye nokunxitywa. Ukufakwa kwezi zinto kwenza le modeli ibe nexabiso elincinci kwibhanki yamandla ye-10,000mAh, kodwa siziva ngathi ukusebenza okongeziweyo kufanelekile.
Ama-omars ayi-10,000mAh iLimeLight yebhanki yamandla
Ukuhanjiswa kwamandla ukutshaja ngokukhawuleza
Umboniso wedijithali ubonelela ngokuthe ngqo ngolwazi lweepesenti
Iqapheleke ngexabiso eliphantsi kunemodeli ye-Aukey
Akukho kubiza ngokukhawuleza kwi-iPhone XS
Bulky ngomthamo wayo
Ukuba ukhangela into efikelelekayo eza kuwenza umsebenzi, i-Omars LimeLight 10,000mAh yamandla ebhanki sisixhobo onokufuna ukusithathela ingqalelo. Itshaja ephathekayo iphindwe kabini ngexabiso eliphantsi njengemodeli ye-Aukey, kodwa inika ukuhanjiswa kwamandla kwe-18W efanayo eya kufumana i-iPhone yakho ukusuka kwi-0 kuye kwi-50% malunga nemizuzu engama-30. Ngapha koko, kukho & apos; umboniso wedijithali oza kukubonisa kanye ukuba ungakanani umjelo oshiye kwibhanki yamandla. Zintathu iintlobo zezibuko onokuzisebenzisa- i-USB-C, i-USB-A, kunye neMicro-USB- okuthetha ukuba ungabiza malunga nayo nayiphi na igajethi.
Kwicala elisezantsi, ibhanki yamandla kunye nobukhulu be-apos bume kwi-6.5 x 3.6 x 1 in. Oku kuthetha ukuba inkulu ngokubonakalayo kunomrhumo we-Aukey, zinezixhobo zombini ezinobunzima obujikeleze isiqingatha sephawundi. Kwakhona, akukho mrhumo ukhawulezayo ngokukodwa kwi-iPhone XS. Ewe, nathi siyamangaliswa.
Iibhanki zamandla ngentambo yombane
Iapile kunye neapos; iintambo zombane zangaphambili zithengisa amaxabiso angaphezulu kwe- $ 19. Ukuba ufuna ukutsiba oku kuthengi, kungcono kwaye ufumane i-bhanki yamandla ebandakanya intambo enjalo ukusuka ekuhambeni.
INucharger PD 20,100mAh Power Bank
Ukukhawuleza ngamandla okungama-30W kwamandla, PD 2.0 kuyaxhaswa
Umbane we-3-in-1, i-m-USB, kunye nentambo ye-USB-C ifakiwe
Ikhaphukhaphu kwaye icwecwe
Inqaku le-4 yenqanaba lebhetri ebonisa ukuba ayilunganga kwibhanki ephezulu
Zininzi ii-apos zokuthanda malunga neNucharger PD 20,100mAh yamandla ebhanki. Inomthamo omkhulu, ixhasa iPD 2.0, kwaye inamandla okutshaja ukuya kuthi ga kwi-30W, oko kuthetha ukuba inokutshaja ngokukhawuleza i-iPad yakho kunye neMacBook ngokunjalo. Ukongeza, itshaja iyafikeleleka kwaye iyahambelana kudidi lwayo.
Ibhanki yamandla iza ne-3-in-1 intambo ngombane, i-USB-C, kunye nokuphela kwe-USB-encinci, eyenza ukuba ibe bhetyebhetye. INucharger inezinto enye kwi-USB-C kwi / kwimveliso ene-PD 2.0, kunye neziphumo ezimbini ze-USB-A 5V / 2.4A nge & apos; ukutshaja okukuko '.
Umbane owakhelweyo kunye neentambo ezincinci ze-USB
Akukho PD, kodwa kufuneka ihlawulise ifowuni yethu ngokukhawuleza kunetshaja esemgangathweni ye-Apple
Kuya kufuneka icwecwe ngakumbi
Eyona nto iphambili kwiJackery Bolt ziintambo zayo ezimbini ezakhelwe-ngaphakathi (umbane oqinisekisiweyo we-MFI enye ye-micro-USB enye), ekuncedayo ukuba ungabinangxaki ngokunikezela iintambo zangaphandle ngokwakho. Ngelixa intambo ye-USB ebonelelweyo iyiMicrosoftUSB enye, ibhanki yamandla inezibuko elivulekileyo ukuze uqhagamshele intambo yakho ngaphakathi.
Umthamo yi-6,000mAh, eqinisekisa isibini seentlawulo. Owu, unokusebenzisa ukudlula-ngokutshaja-ungabiza izixhobo zibe mbini ngelixa ujonga ibhanki yamandla uqobo.
Iibhanki zamandla ngokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ukuba ungumnikazi wemodeli ye-iPhone ukusuka ngo-2017 okanye kamva, siyakubongela, ungasebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo! Iibhanki zamandla ezingezantsi zinokuyinyusa ifowuni yakho ngaphandle kobunzima bamazibuko kunye neendlela.
Thenga i-10,000mAh 10W yeBhanki ye-Qi engenamandla engenazingcingo
7.5W ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-iPhones
Unokubiza ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-4 ngaxeshanye
Ngaba umnini umnxeba
Isidudla, kodwa kungenjalo icwecwe
Le bhanki yamandla ye-10,000mAh evela eHokonui ibonakala ngathi iphawula zonke iibhokisi ezifanelekileyo. Inika ukuhanjiswa kwamandla kunye neCharge 3.0, ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-10W kunye ne-7.5W ephezulu enokuthi ihlawulwe yi-iPhones, kwaye iyafikeleleka. It & apos; s kancinci kwicala elingqindilili, kodwa ngapha koko, isixhobo sincinci kune-iPhone X. Umboniso wedijithali owakhelweyo uhlala uyinto eyamkelekileyo, kwaye ibhanki yamandla inesifaki sefowuni onokuthi uyisebenzise.
I-Kuppet 20,000mAh ibhanki yamandla engenazingcingo
Umthamo omkhulu we-20,000mAh
Enye yeemveliso ezikalwe kakhulu kwiAmazon
Akukho kubiza ngokukhawuleza
Umboniso wedijithali ubonakalisa kuphela ubomi bebhetri kwikota
Ukuba ukuthembeka kuphezulu kuluhlu lwakho oluphambili, sukujonga phambili. Le bhanki yamandla engenazingcingo ngokulula yenye yezona mveliso zinexabiso eliphezulu kwiAmazon- 99% ye1.120 yokujonga abathengi iyilinganisile 5/5 iinkwenkwezi. Ibhetri ye-20,000mAh ngaphakathi kufuneka ikwazi ukutshaja ngokupheleleyo i-iPhone yakho ubuncinci amaxesha ama-5. Ungahlawulisa ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-3 ngaxeshanye ubulela kwiziphumo ezibini kunye nephedi yokutshaja ngaphandle kwamacingo, kodwa ngelishwa, akukho mrhumo ukhawulezileyo uxhaswayo.
Itshaja ezinesakhono esiphakamileyo
Kwabo bafuna ibhanki yamandla ekwazi ukutshaja i-iPad kunye neMacBook ukongeza kwifowuni yakho. Ukuba ukhangele into encinci kunye necompact, hlala kude kwezi tshaja.
I-Aukey 30,000mAh yebhanki yamandla
30W yamandla, PD kunye ne-QC 3.0 ixhaswe
Umthamo omkhulu we-30,000mAh
Le modeli ye-Aukey ayibonisi kuphela nge-30,000mAh yamandla okhuphelo, kodwa ikwaxhasa umbulelo okhawulezayo wokukhawulezisa ngenkxaso yayo yeQualcomm ekhawulezayo yokutshaja 3.0 kunye nemigangatho yokuhanjiswa kwamandla ye-USB-C. Ibhanki yamandla iya kuhlawulisa iMacBook yakho ngokukhawuleza njengeadaptha yokuqala yodonga lweLaptop.
Xa uhlawulisiwe, le bhanki yamandla ingakususa kude nempucuko phantse iveki- inokuhlawulisa ngokupheleleyo i-iPhone XS ukuya kuthi ga kumaxesha ali-9 kwaye unokufumana phantse ii-2 zihlawuliswe ngokupheleleyo kwi-12-intshi iMacBook Pro. Ewe, le mveliso ayinabuthathaka okanye incinci - enobunzima be-1.22 lbs, uya kuqaphela ngokuqinisekileyo xa ibhanki yamandla ikubhaka wakho.
Kwicala eliqaqambileyo, iAmazon okwangoku iqhuba ipromo ekuvumela ukuba ugcine i $ 20 kwi-MSRP yesiqhelo. Isivumelwano sinokuphela kungekudala, ngoko ke yenza ngokukhawuleza ukuba unomdla.
Anchor PowerCore + 26,800
30W itshaja ne PD
Iza kunye neadaptha yodonga eyi-30W
Icwecwe ngokuthelekiswa nobukhulu bayo
Eyona bhanki yamandla inexabiso eliphezulu
I-Anker PowerCore + iphezulu kwisebe lezakhono eziphezulu, ngaphandle kokuba uzimisele ukuhlawula ixabiso. Ibhetri ye-26,800mAh ngaphakathi ingabiza iMacBook Pro 13 ngokupheleleyo ngejusi ethile ukuyigcina kunye ne-iPhone X ngaphezulu kwamaxesha ama-6. Ngapha koko, amaxesha okutshaja ebhanki yamandla ancitshiswe kakhulu ngenxa ye-30W i-USB-C eludongeni iadaptha ebandakanyiweyo kwiphakeji (ungayisebenzisa ukubiza iMacBook yakho nayo). Le modeli ineempawu ezi-1 ze-USB-C (30W) kunye nee-2 zezibuko le-USB (5V / 3A inye) kwaye icwecwe kwiklasi yayo.
Ngaba i-walmart ithengisa iifowuni eziphathwayo
ibiyintoni ifowuni yokuqala yesamsung
Uhlelo lokusebenza longeza ukusebenza kukaMncedisi kuGoogle kwi-Samsung Galaxy Watch yakho
Uhlaziyo kwiVerizon & apos; Galaxy Note 20 kunye neGalaxy Note 20 Ultra ibulala i-bugs ifile
I-T-Mobile iyaqhubeka isebenzisa i-Sprint & apos; s 2.5GHz isibonisi sothungelwano lwayo lwe-5G
Isamsung ye-Samsung Galaxy FE ligama elitsha leNqaku 7, eliya kuthi liqalise ukuphela kukaJuni eKorea
Thenga i $ 50 okanye ngaphezulu kwekhadi lesipho kuGoogle Play elivela kwiAmazon kwaye ugcine i- $ 5
Useto lwesaziso kwii -apps zemiyalezo lububudenge
I-T-Mobile ngokusemthethweni zonke ngaphandle kweefowuni zikaGoogle ngaphambi kokumiliselwa kwePixel 4a